“Waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo” – Ramsey oo kasoo muuqday shirkiisii jaraa’id ugu horeeyay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan Juventus – Gool FM
(Italy) 15 Luulyo 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Weles ee Aaron Ramsey ayaa ka hadlay shirkiisii jaraa’id ugu horeeyay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan kooxda Juventus, wuxuuna tilmaamay sida weyn uu ugu faraxsan yahay imaatinkiisa garoonka Allianz ee magaalada Turin.
Aaron Ramsey ayaa ugu dhaqaaqay horyaalka Serie A si xor ah, kaddib markii uu dhamaaday qandaraaskiisa kooxda reer London ee Arsenal.
Ramsey ayaan aheyn ciyaaryahankii ugu horeeyay reer Weles ah ee xirta maaliyada kooxda Juventus, waxaana kaga horeeyay John Charles oo soo xirtay maaliyada cadaanka iyo madooga ah inta u dhexeesay 1975 ilaa iyo 1962.
Xiddiga khadka dhexe reer Weles ee Aaron Ramsey ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Waxaan idin kaga mahadcelinayaa dhamaantiin imaatinkiina, waxaan doonayaa inaan sheego inaan ku faraxsanahay ku biiristeyda kooxda Juventus, waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, waan ka xumahay in luqadeyda Talyaaniga aysan aheyn mid aad u fiican, laakiin haatan waan baranayaa”.
“Markii aan maqlay in Juventus ay i xiiseyneysay, waxaan u arkay inay tahay fursadii aan ku riyoon jiray, waxaana rajeynayaa in wax walba si wanaagsan u socdaan”.
“Kooxda waxay ii soo dhaweysay si aad u wanaagsan, tababarahana wuxuu u muuqdaa inuu yahay qof shaqeynaya, ma sugi karo si aan u gaaro hadafyadeyda, waxaan doonayaa inaan halkan ugu ciyaaro si fiican”.
Intaas kaddib Aaron Ramsey ayaa wuxuu ka hadalay aragtidiisa kaga aadan macalin Maurizio Sarri wuxuuna yiri:
“Waxaan arkay isagoo tababare kooxda Chelsea ah xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, waa macalin jecel inuu ciyaaro kubadda cagta ee aad u fiican, shaqo fiican ayuu ka qabtay Chelsea, waxaan ku kalsoonahay inuu halkan ku guuleysan doono”.
Yeelkadeeda, Aaron Ramsey ayaa u soo ciyaaray Arsenal mudo dhan 11 sano ah, waana intii u dhaxeysay 2008 ilaa iyo 2019, wuxuuna kula guuleystay 5 koob, waxaana ka mid ah FA Cup oo 3 jeer ah, iyo FA Community Shield oo 2 jeer ah.